Nepali Christian Bible Study Resources - जयजयकार किन?
» अध्ययन मालाहरू » ख्रीष्टको संक्षिप्त जीवनी » ८-जयजयकार किन?
क्रूसमा उहाँको मृत्यु हुन एक हप्ता पनि बाँकी नहुँदा, जब प्रभु येशू यरूशलेम शहरभित्र प्रवेश गर्नुभयो,के मानिसहरू खुशीले गद्‍गद् भए (मत्ती २१:९)? ______________। उनीहरू “होसन्ना” भन्दै कराए जसको अर्थ हो, “हामीलाई बचाउनुहोस् आज!” उनीहरू केबाट बचाइन चाहन्थे? के उनीहरू आफ्ना पापबाट बचाइन चाहन्थे (येशू आउनुको कारण नै यही थियो -- मत्ती १:२१ मा पढ्नुहोस्)? के उनीहरू आफ्ना गलत जीवन शैलीबाट, गलत सोचाइबाट र गलत व्यवहारबाट बचाइन चाहन्थे? के उनीहरू पापलाई घृणा गर्नुहुने धर्मी परमेश्वरको भयानक दण्डबाट बचाइन चाहन्थे?
पापबाट मुक्ति नपाएको एक व्यक्ति (परमेश्वरबाट अलग रहेको व्यक्ति -- मर्कूस ७:१९-२३)लाई विचार गरौं। मानौं उसलाई बस्नका लागि एउटा सुन्दर दरवारको प्रबन्ध गरियो। उसलाई मन परेअनुसार खर्च गर्नका लागि १ अरब रूपैयाँ पनि दिइयो। के यस्तो अवस्थामा पनि उसलाई समस्या पर्न सक्छ? के ऊ सम्पूर्ण समस्याहरूदेखि मुक्त हुन्छ? समाजमा अरू मानिसहरूसित के उसलाई पहिलाजस्तै समस्या पर्न सक्छ?के ऊ साँच्चै नै खुशी हुन्छ?अब एउटा पवित्र जन (परमेश्वरद्वारा शुद्ध पारिएको हृदय भएको व्यक्ति)लाई विचार गरौं। मानौं उसलाई शहरको फोहोर गल्लीभित्र रहेको, मान्छे भन्दा मुसा बढी भएको एउटा थोत्रो झुपडिमा बस्न दिइयो। यो गन्जागोलको बीचमा पनि के उसलाई शान्ति (भित्री आनन्द) मिल्न सक्छ?मानौं एक पवित्र जनलाई कष्टपूर्ण सुरुङरुपी झ्यालखानामा राखेर उसलाई अपराधीलाई जस्तै व्यवहार गरियो। के यस्तो अवस्थामा पनि ऊ खुशी हुन सक्छ (प्रेरित १६:२२-२५ हेर्नुहोस्)? __________।
« पर्वतमाथि के देख्यौ?